आखिर आफ्नो आफ्नै हुन्छ | samakalinsahitya.com
रञ्जना बिहानपखको कलिलो घामको किरणमा मीठो न्यानोपनको अनुभूति गर्छे । अनि ऊ आकाशतिर टाउको उठाउँदै हेर्छे । सफा आकाश देखेर मन प्रफुल्ल हुन्छ । हिजो पानी परेकाले आज वातावरण सफा र स्वच्छ देखिन्छ । बिनब्यागमा फोहोर पोको पारेर बाहिर राख्छे अनि फेरि घरभित्र पस्छे । रञ्जना हतारहतार सिरकभित्र मुन्टो लुकाएर सुतेको कमलको निधार छाम्छे । कमललाई राति अलिअलि ज्वरो थियो, तर, अहिले ठीक छ । ऊ ढुक्क हुन्छे ।
कमल आज अलि बिसन्चो भएकाले सुतिरहेछ । उसलाई रञ्जनासित काममा जाने इच्छा छैन । आज उसलाई उठ्ने जाँगर पनि छैन । रञ्जना कमललाई एकपल्ट नियालेर हेर्छे अनि बाहिर निस्कन लाग्छे । “कमल, म गएँ । तातो पानी खानू अनि औषधी खान नबिर्सनू ल ।” भनेर उसले कोठाको ढोका ढ्याप्प बन्द गर्छे । अनि ऊ बस स्टपतिर हुइँकेर लाग्छे ।
रञ्जना सोच्दै छे, ‘हन, सधै“ कति हतार हुन्छ मलाई ?’ काठमाडौ“को व्यस्त जीवन, बिहानदेखि बेलुकीसम्मको ट्राफिक, धुँवा, धुलो र आनो भाग्य अजमाउन देशका कुनाकुनाबाट आएका मानिसहरुको बाक्लो लहर सडकभरि हिँडिरहेका सधै“ देख्छे ऊ । अस्थिर राजनीतिक वातवरण, प्रायः सधै“जसो बन्द हुने यो सहर र दैनिक लोडसेडिङको मारले पीडित जिन्दगी । रञ्जना कहिलेकाही“ दिक्क मान्छे । ऊ मनमनै हिसाब गर्छे— ‘काठमाडौ“ आएको पनि ३ वर्ष बितिसकेछ । समय कति छिटो बित्दै छ ।’ समय तीव्र गतिमा उडेभैmँ लाग्छ रञ्जनालाई । अचेल बेलाबखत तीन वर्षपहिलेको रमाइलो अतीत सम्झिन्छे ऊ । केही पाउन धेरै गुमाएभैm“ लाग्दै छ रञ्जनालाई अहिले । तर ऊ कमलको अँगालोमा पुग्दा सबै भुल्छे । केही दिनदेखि बुवाआमा र घरको मायाले तानिरहेभैmँ लाग्छ रञ्जनालाई । त्यसैले ऊ बेलाबेलामा विचलित बन्न पुग्छे । जीवनका भोगाइहरु सम्झँदा यी तीन वर्षभित्र आपूm निकै परिपक्व भएभैmँ लाग्छ आपूmलाई । आनो चाहना प्राप्तिका लागि स्वयंले गरेको निर्णयका लागि अरु कसैको दोष देख्दिन ऊ । आफन्तको सम्झनामा कहिलेकाही“ छटपटिन्छे रञ्जना । अतीतका स्मृतिहरुभित्र बेलाबखत हराउँछे ऊ ।
सम्झनाका लहरहरु रुपौलो पर्दाको चलचित्रभैmँ आँखाअघि तैरिन थाल्छन् । तिनै सुखद पलका सम्झनामा घर–आँगन र भाइटीकाको स्नेहसिक्त वातावरणभित्र हराउँछे ऊ । भाइटीकाको दिन भाइको भरिलो, चाक्लो निधारमा टीका लगाइदि“दा ऊ कति खुसी थिई । भाइलाई पानीले परिव्रmमा गरी पूजा गरेपछि कान, टाउकामा तेल लगाएर टीका लगाइदिएकी थिई । सयपत्री पूmलको माला र टाउकामा ढाका टोपी पहिराइदिएकी थिई । यी सम्झनाहरुमा बहँदै जाँदा आँखाबाट आँसुका थोपाहरु बरर खसेको थाहा नै पाइन उसले । गाडीभित्र अरुले नदेख्ने गरी आँसु पुछी । खचाखच भरिएको माइव्रmो बसभित्र बसिरहँदा पनि ऊ अतीतमा डुबिरहेकी थिई । त्यो पारिवारिक मायाको परिवेशबाट टाढिएको अहिले पूरा तीन वर्ष भइसकेको छ । अहिले ऊ सम्झन्छे, त्यही तीन वर्षपहिलेको भाइटीकाको दिन । ऊ हराउँछे त्यही सम्झनामा ।
सम्झनामा आवाजहरु आउन थाल्छन्—
आमा भन्दै थिइन्, “छोरा ! दिदीलाई ढोग् ।”
भाइले, “हुन्छ आमा, ढोग्दै छु ! अनि ढोगेपछि कति पैसा दिने दिदीलाई ?” भन्दै आमातिर खेलाँची गर्दै हेर्छ भाइ वृmष्ण ।
“त्यही मैले दिएको हजार रुपैयाँ दे न दिदीलाई ।” .आमा भन्छिन् ।
“नाइँ, यो त धेरै भयो ।” भाइले यति भनेर खल्तीबाट नोट निकाल्छ । नोट निकालेर हातमा राम्ररी लिन भ्याएको हुँदैन, रञ्जनाले थुत्त नोट थुतेर हातमा लिन्छे ।
भाइ हाँस्दै, “कहाँ पाँच सय दिएर पाँच सय राख्छु भनेको ! खोसिहाली दिदीले ।” भनेको झलझली सम्झिन्छे अहिले ऊ । अहो, कति मीठो खुसी थियो त्यो मायाको संसारमा ! त्यो सम्झँदा रमाइलो लाग्छ रञ्जनालाई अनि ऊ एक्लै मुस्काई फिस्स, तर त्यसै बेला सम्झनाको मीठो आभास भङ्ग हुन्छ ।
“.ठमेल ! ठमेल ! ठमेल ! कोही छ झर्ने ?” भनेर कन्डक्टर केटा कराएको सुन्दा झस्किन्छे रञ्जना र गाडी रोकिएपछि ओर्लन्छे । कोचाकोच भएको माइव्रmोबाट रञ्जना झर्न नपाउँदै तीन जना गाडीमा पस्न खोज्छन् ।
कन्डक्टर केटो कराउँछ, “पहिले मान्छेलाई ओर्लन दिनोस् !”
मीठो सम्झनाको धुरीबाट जीवनको तीतो यथार्थको धरातलमा खसेजस्तै लाग्छ रञ्जनालाई ।
अहिले रञ्जनालाई कताकता आमा, भाइबहिनी र बुवा आना लागि बिरानिएभैmँ लाग्न थाल्छ । तीन वर्षको अन्तरालभित्र आपूmले उनीहरुलाई गुमाएको अनुभूतिले पोल्न थालेको छ । ‘मेरो संसार किन बिरानो भयो यसरी ?’ आदि कुराहरु सोच्दै ऊ गाडीबाट ओर्लेपछि अमृत साइन्स क्याम्पसबाट अलिक भित्रपट्टि तर नजिकै रहेको ठमेलको एभरेस्ट एडभेन्चर ट्राभल्स एन्ड टुर्स एजेन्सीको कार्यालयतिर लाग्छे । आनै जीवनसँग जुध्दै छे रञ्जना अनि एक्लै मनमा अनेक तर्क गर्छे । बुवाआमाको मर्जीबिना अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकी रञ्जनालाई अहिले माइततिरका परिवार र इष्टमित्रहरुको बेसरी सम्झना आउँछ ।
आपूmलाई उनीहरुले किञ्चित् वास्ता नराखेको अनुभूतिले अचेल रञ्जनाको मन खान थालेको छ । उसले अरुबाट बुवा इराकतिर अनुबन्धमा काम गर्न गएको थाहा पाउँछे । खुसीको कुरा, भाइले टेन प्लस टु पास गरेर मणिपाल अस्पतालमा एम.बी.बी.एस. पढ्दै गरेको खबर उसले पाउँछे । बहिनी अञ्जनालाई मामाको छोरा दीपकसँग, आपूm कमलसँग भागेर आउँदाका दिन, त्यही लगनमा विवाह गरिदिएका थिए । ऊ दीपकसँग बेलायत गइसकेकी छ ।
घरपरिवारले आनो परम्पराअनुसार मामाको जेठो छोरा दीपकसँग रञ्जनाको विवाह गरिदिने अन्तिम तयारी भइसकेको बेलामा रञ्जना भागेर कमलसँग काठमाडौ“ आएकी थिई । यी घटनाव्रmमहरु हिजो जस्तै लाग्छ रञ्जनालाई । रञ्जना भागेकी घटनाले घरमा एक पटक बुवा र आमाले ठूलो तुफानको सामना गर्नु परेको थियो । जन्ती आएर सँघारमा पर्साउन तमतयार हुँदा बेहुली घरपछाडिबाट भागेको कसैलाई थाहा थिएन अन्त्यसम्म । बेहुलीलाई बोलाउन जाँदा खैलाबैला मच्चिएको थियो, घरभित्र । धन्न आफन्तको घेराभित्रका कुटुम्ब भएकाले सबैको नाक जोगिएको थियो । ज्ञानी भान्जा र कान्छी छोरीलाई सम्झाइबुझाई गरेर त्यही विवाह लगनमा विवाह गरिदिएका थिए ।
बाहिरकाले जे भने पनि आपसमा केही समयपछि सबै ठीक भएको थियो । ऊ सम्झन्छे अहिले, बुवाआमाले उसलाई पालनपोषणमा केही कमी त राखेका थिएनन् । उनीहरुको विश्वासलाई आपूmले ठूलै घात गरेको अनुभूति, कहिलेकाही“ गर्छे, अचेल । रञ्जनालाई कताकता आत्मग्लानि हुन्छ । आनो मन आपैmँ भुलाउने प्रयास गर्छे । बहिनीले छोरा पाएको खबर छ्यामाबाट थाहा पाएकी थिई । खबर सुनेर एक किसिमको आनन्द र खुसी लागेको थियो रञ्जनालाई, तर, कोसँग बाँड्ने यो खुसी ? तीन वर्षदेखि रञ्जनाको सम्पर्क परिवारसँग छँदै छैन ।
रञ्जना बुवाको नोकरीको दौरान शिलाङमा जन्मेकी थिई । शिलाङबाट पाँच वर्षपहिले पोखरा आएकी थिई ऊ । कमल र रञ्जना पहिलो भेटमा नै आँखाको बाटो हँुदै एकअर्काको मुटुमा समाहित भएका थिए । उनीहरुको पहिलो भेट फेवातालको वाराही मन्दिर जाने बाटोमा भएको थियो । उनीहरुले एउटै डुङ्गा चढ्ेका थिए । त्यही प्रथम भेटमा नै कमल र रञ्जना मन्दिर परिसरसम्म पुग्दानपुग्दा उनीहरुको मनभित्र माया अङ्कुरित भएको थियो । एउटा दिव्य मोहको आकर्षण हृदयभित्र प्रेमराग बनेर ढुकढुक बज्न थालेको थियो । त्यसपछि बिस्तारै मायाको पूmल हृदयभित्र फुल्दै गरेको दुवैले महसुस गरे । अनि त मायाको पूmलको सुवासमा दुवै जना मदहोश हुँदै प्रेमपथमा सदाका लागि अघि बढ्दै गए । उनीहरुबीचको प्रेम गतिवान् भएर बढ्न थाल्यो । शान्ति वन, सेती नदीको तीर, फेवा ताल र वेगनास तालको सेरोफेरोमा उनीहरुको माया निरन्तर मौलाउँदै गएको थियो । यसरी मायाको सप्तरङ्गी सपनामा एउटा मीठो संसार बुनेका यी दुई प्रेमीप्रेमिकाको अन्तरङ्गबारे परिवारजनलाई अन्तिम समयसम्म ठ्याम्मै थाहा हुन सवmेन ।
पुरानै संस्कारका पुजारी अभिभावकहरुले दुवै जनाको विवाह आआना खानदानभित्र तय गरिसकेका थिए । दुवै जनाका अभिभावकहरुले विवाहबारे उनीहरुलाई जनाउ दि“दा उनीहरुको प्रेमयात्राले नेटो काटिसकेको थियो । परम्परालाई दिगो राख्नेहरुको हठ र प्रेममा डुबेकाहरुबीच सैद्धान्तिक द्वन्द्व सुरू भयो । रञ्जनाको विवाह मामाको छोरासित हुने पक्का छिनिएको छ भन्नेबारे बुवाआमाले उसलाई भनेकै थिएनन् । दीपक छुट्टीमा आउनुअघि नै विवाहको निम्तोकार्ड छापिइसकेको रहेछ । कार्ड छापेर आएको निकै पछि मात्र रञ्जनालाई थाहा लागेको थियो । बुवाआमाले अनुशासित र समझदार छोरीले उनीहरुको कुराको कहिल्यै विरोध गर्ली भनेर एकरत्ती फरक चिताएका थिएनन् । कमल र रञ्जनाका परम्परावादी अभिभावकहरु इष्टमित्रको दायराभित्र परस्परको विवाहद्वारा समाज फराकिलो पारी आनैहरु मिली गोलबन्द भएर बस्ने कुरामा विश्वास राख्थे । र, सन्तानले उनीहरुको निर्णयलाई अवश्य मान्नेछन् भन्ने सोचेका थिए । तर, जमाना धेरै अघि बढिसकेको कुरामा उनीहरुले हेक्का राखेनन् ।
आनो अप्रत्याशित विवाहका बारेमा आपूmलाई नै एक शब्द नसोधी यसरी विवाहको मिति तोकेर कार्ड छापेकामा रञ्जनाले बुवाआमासँग घोर विरोध गरी । तर, बुवाआमाको प्रस्ट भनाइ थियो, विवाह दीपकसँग नै हुन्छ । “एउटा लाहुरे लोग्ने पाउनु भनेको भाग्यमानी हुनु हो छोरी,” भनेर अन्तिम पैmसला सुनाएका थिए । प्रेमको गहिरो मन्थनमा रल्लिएकी रञ्जनाका अघि दुईवटा कुराहरु ठिङ्ग उभिए । परिवार त्यागेर कमलसित भाग्नु अथवा प्रेमबन्धनलाई चटक्कै तोडेर बुवाआमाको आदेश पालन गर्नु ।
समयले साथ दिएन उनीहरुलाई । अभाग्यवश रञ्जना र कमलले विवाहका लागि दुवैतिर नाटकीय तवरमा एवैm खाले आप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपरेको थियो । कमलको विवाहका लागि पनि त्यस्तै स्थिति सिर्जना भएको रहेछ । बुवाआमाले आफन्तभित्रका एक जना कन्यासँग विवाह गरिदिने बन्दोबस्त गरिसकेका रहेछन् । विवाहका लागि कमललाई बुवाआमाले फकाएर दबाव दिन थालेका थिए । त्यस कन्यालाई जसरी पनि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने बुवाआमाले दृढताका साथ आनो अन्तिम इच्छा जाहेर गरेका थिए । तर कमलले बुवाआमालाई रञ्जनाबाहेक अरुलाई विवाह नै नगर्ने हठ लिएर विद्रोह गर्न थालेको थियो । पुरानो सोचका बुवाआमाको विवेकलाई खानदान, संस्कार र परम्पराको बादलले ढाकेको थियो । अब के गर्ने ? विवाहको दिन तय भइसकेको थियो ।
प्रेमको गहिराइमा डुबेको कमलले यो जबरजस्तीलाई आपूmमाथि भएको ज्यादती सम्झेको थियो । अतः ऊ बुवाआमाको निर्णयलाई विफल पार्न प्रतिकारमा उभिएको थियो । रञ्जना पनि कमलका लागि परिवार त्यागेर भाग्ने निष्कर्षमा पुगेकी थिई । त्यति बेला उनीहरुका प्रेमको अघि दुवै परिवार तगारो बनेका थिए । एकातिर प्रेमको उँचाइले आकाश नाघिसकेको थियो भने अर्कोतिर पारिवारिक मानमर्यादा तोड्न पनि सजिलो थिएन । अन्त्यमा उनीहरु समयसँग जुझ्दै आनै संसार बसाउने दृढ सङ्कल्प गरेर परिवारको तगारो नाघेर भागेका थिए । कमलले परिवारको इच्छाबिना रञ्जनालाई काठमाडौ“ भगाएर ल्याएको थियो । यसरी उनीहरुले काठमाडौ“मा नै तीन वर्ष बिताइसवmेका छन् । यति बेला परिवारको मायाबिनाको जीवन उनीहरुलाई असहज लाग्दै छ । परिवारको माया र आवश्यकता अत्यन्त महसुस भइरहेछ । आखिर आफन्तको न्यानो माया कसलाई चाहिन्न र ? त्यस्तै माया र स्नेहको द्वन्द्वमा पिरोलिएका यी दुई जना अहिले आफन्तको सान्निध्य प्राप्त गर्न अति लालायित छन् ।
पोखराको व्यावसायिक केन्द्र चिप्लेढुङ्गामा आना केही घरकोठा दुकानका लागि भाडामा दिएको कृष्णलाल एक जना सम्पन्न र प्रतिष्ठित पोखरेली व्यक्तित्वमध्ये पर्दथ्यो । कमल उसवैm जेठो छोरो थियो । बुवाआमाले आनै जातभित्रकी मात्र नभई आफन्तभित्रकी कन्यालाई विवाहका लागि ठिक्क पारेका थिए । कमल बुवाआमाको इच्छाविरूद्ध विद्रोह गरेर रञ्जनालाई लिएर अन्यत्र ओरालो लागेको थियो । काठमाडौ“ आएपछि उसले केही साथीहरुको मदतबाट परम्परागत इष्टदेवतालाई सा†ी मानेर मन्दिरमा विवाहसंस्कार पूरा गरेको थियो । पतिपत्नीका रुपमा आजीवन एकअर्कालाई साथ दिने बाचामा बाँधिएका थिए ती दुवै । कमल र रञ्जनाले काठमाडौ“ आएर केही दिन घुमफिर गरी मधुमास मनाउँदै समय बिताएका थिए । जीवनमा एकले अर्कालाई प्राप्त गरेकामा खुसी थिए दुवै । उनीहरु आनै संसारमा मक्ख थिए । केही महिनापछि ल्याएको पैसा सकिँदै गयो । अब जीवन गुजार्न केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलाउन थाल्यो उनीहरुमा । उनीहरु सामाखुसीमा एउटा ल्याट लिएर डेरा गरी बस्दै आएका थिए । कमलले आपूm र रञ्जनालाई काम खोजिदिनका लागि आनै साथी गोपालसँग आग्रह गरेको थियो । गोपालले मित्रताको कर्तव्य पूरा गर्दै आनै ट्राभल्स कम्पनीमा दुवै जनालाई काममा राखेको थियो ।
परिवारले केही समयपश्चात् अवश्य अपनाउलान् भन्ने उनीहरुको दृढ विश्वास थियो । तर हप्ता, महिना, वर्ë गरी तीन वर्ष बितिसकेका थिए । दुवैतिरका घरपरिवारले उनीहरुको वास्ता नै गरेनन् । उनीहरुको आशा †ीण हुँदै गइरहेको थियो । बेलाबेलामा घरको सम्झना आउँदा के मुख लिएर आमाबुवालाई भेट्न जाने भन्ने रञ्जनाको मनमा कुराहरु खेल्थे र ऊ मानसिक रुपमा आन्दोलित हुन्थी । नानाथरीका कुराले मन धमिलो हुन्थ्यो । आपैmँ नाता तोडेर भागेकी रञ्जना सोच्ने गर्छे— ‘एक्काइसौ“ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि आमाबुवा युवा छोराछोरीहरुको विचार बुझ्दैनन्, किन ? संसार यति बदलिसक्यो तर खानदान, जातपातमै सीमित किन ?’ आपै“mले आपैm“लाई प्रश्न गर्छे ऊ— ‘मैले केही बिगार गरेको त हैन, प्रेम गरे“ र मन परेकासँग आएँ ।’ यस्तैयस्तै कुराहरु सोच्छे ऊ । फेरि लामो सास फेर्दै मनमनै भन्छे— ‘मैले बुवाआमाको मर्जीलाई केही वास्ता गरिनँ ।’ यस्तै नानाथरीका विचारले रञ्जनालाई खान्थ्यो । उनीहरु दुवै खुसी थिए, तर त्यो खुसीमा घरपरिवार सामेल थिएनन् । उनीहरु आफन्तहरुबाट टाढिएका थिए । रञ्जनाले बेलाबखत छ्यामासँग सम्पर्क गर्ने गर्थी, तर, छ्यामा पनि केही महिनाअघि परिवारसहित बेलायत गइसकेकी थिइन् । सम्पर्क हुन मुस्किल थियो ।
कमल र रञ्जनाका बारेमा घरपरिवारलाई उनीहरु काठमाडौ“मा छन् भन्ने कुरा थाहा थियो, तर उनीहरुले बोलाउने र खोजी गर्ने कहिल्यै प्रयास गरेनन् । यसरी उनीहरुलाई तिनीहरुले किन माया मारेका होलान् ? उनीहरुले वmेही भन्ने बाटो नै थिएन । संयोग पनि कस्तो अचम्म ? रञ्जनाकी बहिनीलाई ललाईफकाई गरी दीपकसँग विवाह गरेजस्तै कमलको भाइ विमलसँग कमलको लागि विवाह ठिक्क पारेकी दुलहीलाई धुमधामसँग विवाह गराइदिएका थिए । विवाहपश्चात् उनीहरुले अत्यन्त खुसीसाथ नयाँ जीवन बिताइरहेका थिए । एक प्रकारले त्यस घरसित कमलको सम्बन्ध नै टुटेजस्तो थियो ।
रञ्जनालाई उसले विवाह त ग¥यो, तर कमलले रञ्जनालाई घरमा लगेर भिœयाउने आँट भने गर्नै सकेन । ‘कुन मुख लिएर पसूँ त्यो घरभित्र ?’ कमल सोच्थ्यो । केही समयपछि बुवाआमाले स्वीकार गर्लान् भन्ने आशाचाहिँ आशामै सीमित रहन पुगेको छ अहिले । आफन्तको माया नपाउँदाको पीडाले मन कति पिरोलिन्छ, त्यो पीडा भोगेकालार्ई मात्र थाहा हुँदो रहेछ भन्ने आभास उनीहरुलाई हुँदै छ । उनीहरु विचलित छन् अहिले, त्यो निख्खर रगतको नाताले बल्झाएको अनुभूतिले गर्दा !
कमललाई आज अलि सन्चो थिएन । अबेरसम्म सुतेको थियो ऊ । तर ऊ दिउँसोतिर कार्यालय आउँछ । रञ्जनाले कमल आएको देखेर भन्छे, “कमल, किन आ’को ? आराम गरे हुन्थ्यो नि । औषधी खायौ?”
“अलि सन्चो लागेको छ । औषधी खाएँ । केही हैन, सर्दीको मामुली ज्वरो हो ।” कमलले आश्वासनसाथ जवाफ दिन्छ । साथीको ट्राभल्स राम्रो नै चलिरहेको थियो । काठमाडौ“मा उनीहरुको निर्वाह जेनतेन चलिरहेको थियो ।
निर्वाह चले पनि आफन्तले वास्ता नराखेको पीडाबोध हुनु स्वाभाविक नै हो । घरपरिवारको माया नपाउँदा जुन अथाह पीडा उनीहरुले खेपिरहेका थिए त्यो पीडा समयसँगै बढ्दै गइरहेको थियो । अहिले उनीहरुका मनमा यो सहर छोडेर अन्तै कतै धेरै टाढा जाने विचार शनैः शनैः पलाउन थालेको छ । एकआपसमा दुवैले विदेश लाग्ने सल्लाह गरिसकेका छन् ।
पोखरा नजिकै छ, घरपरिवार नजिक छन्, तर उनीहरुको मनमा अब उनीहरुलाई परिवारले अपनाउँदैनन् भन्ने आभास भइरहेको छ । मनभित्रको वेदना कसलाई पोख्ने ? जुन घर–आँगनमा हुर्केर परिवारको माया प्राप्त गरिएको थियो त्यो विगतको एउटा सपना हुन थालेको छ । प्रेमको आवेगमा घरपरिवारको इच्छालाई कत्ति वास्ता नगरेको टीस कहिलेकाही“ रञ्जनाको मुटुको गहिराइ छिचोल्दै आँखाबाट बग्ने गर्दछ । तर कमलको माया भरिएको न्यानो अँगालोले मनभित्रको पीडालाई मल्हमको काम गर्छ । कहिलेकाही“ मनमा परिवारको माया प्राप्त गर्ने झीनो आशा उदाउँछ र क्षणमै अस्ताउँछ । ती सबै बिर्सेर वmुनै दिन साथीसँगीहरुको साथ भएको रमाइलो माहोलभित्र उनीहरु हराउँछन् । यसरी नै जीवन बितिरहेको छ, उनीहरुको । मान्छेलाई जब असहज वातावरणले थिच्दछ त्यति बेला अझ बलियो भएर उठ्ने सङ्कल्प ऊ गर्दछ । त्यस्तै आपूmले केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने अनुभूति कमलको मनमा पलाउन थालेको छ ।
केही दिनदेखि दुवै जना सल्लाह गर्छन् । बेलायत पढ्न जाने विचार गर्दै छन् । बेलायतमा गएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने दुवैले सोचेका छन् । अन्तमा कुनै न कुनै उपाय गरेर यो सहर छोड्ने र बेलायत छिर्ने विषयमा छलफल गरे दुवैले । घरपरिवारले एक न एक दिन बोलाउँछन् भन्ने आशा झन्झन् झीनो हँुदै छ । उता बेलायतमा रञ्जनाले छ््यामालाई फोन गर्दा, “अँ हुन्छ नि, तिमेरको इच्छा भए आऊ न त । धेरै विद्यार्थीहरु आ’का छन्,” भन्छिन् ।
बेलायत जाने विचार त छ, तर पैसाको कमी छ दुवै जनालाई । सातआठ लाख चाहिएको छ । यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ? एजेन्सीमार्पmत जाँदा पैसा झनै बढी लाग्छ । युनिभर्सिटीको फिस, ब्याङ्क ब्यालेन्स र जहाजभाडा जुटाउन निकै गाह्रो भएको छ । एक जना पढ्न जाने, अर्कोचाहि“ डिपेन्डेन्ट भएर जाने योजना बनाएका छन् । चाहिएको रकम बन्दोबस्त हुन असम्भव देख्छन् । पैसाका लागि कसलाई गुहार्ने ? कमललाई आमाको सम्झना आउँछ । जीवनमा बुवासँग उसले कहिल्यै पैसा मागेको थिएन । पैसाको आवश्यकता आमाले नै पूरा गर्थिन् । यस पटक विवश छ ऊ । आखिरमा पहिलो चोटि तीन सालपछि कमलले विवश भएर घरमा आमालाई फोन गर्छ । बुवाले फोन उठाउँछन् कि भन्ने डर थियो । भाग्यवश आमाले नै फोन उठाइन् ।
कमल फोनमा पश्चात्तापको स्वरमा, “हैलो !” भन्छ ।
उताबाट आमाको, “हैलो, को बोल्या ?” भन्ने स्नेहयुक्त स्वर सुन्छ ऊ । आमाको छचल्किएको वात्सल्यले सोभैm कमलको मनमस्तिष्क छिचोल्छ ।
“आमा ! आमा ! ढोग !” धेरै दिनपछि आमालाई फोन गर्दा कमलको गला अवरुद्ध भएको छ । आँखाबाट गङ्गोत्री फुटेभैm“ भेल उर्लेर आँखाका घेराहरु हुँदै गालाभरि बगेका छन् । “आमा ! आमा !” आमा शब्दले आमालाई बोलाउँदा भावविह्वल हुन्छ ऊ, मनमा ठूलो गाँठो परेकाले हिक्का छाड्दै, “आमा ! आमा !” मात्रै भनेर रून्छ कमल ।
आमाले छोराको अवाज फोनमा सुनेपछि, “बाबु छोरा, अशीर्वाद पुगोस् मेरो राजालाई,” भन्दा मनभित्र दबिरहेको ममताको भेल उर्लेर आउँछ उनको पनि । आमा रूँदै भन्छिन्, “मेरो बाबु, तँलाई कस्तो छ ? आमाको माया लाग्दैन तँलाई ?. घर आइज, बुवालाई म भन्छु,” भनिन् अनि ग्वाँ–ग्वाँ रून थालिन् । कमललाई पनि आमाको ममतामयी आँसुले मनभित्रैबाट छिचोल्दै ल्यायो र उनको वात्सल्यले निथ्रुक्क भिजायो । ऊ पनि बेसरी रोयो, भन्यो, “आमा ! आमा, नरोऊ । म आउँछु आमा, तर केही समयपछि । म ठीकैै छु आमा ! नरोऊ ।”
ऊ बेसरी रोयो बीबीचमा हिक्का छाड्दै, “आमा, म केही समयपछि आउँछु । नरोऊ आमा, म बेलायत जान्छु पहिले एकदुई वर्षका लागि । त्यसपछि आउँछु ! आमा ! अहिले मलाई अलि पैसा चाहिएको छ,” भन्यो कमलले ।
आमाछोराले रोएरै मनको बह पोखे । दुवैको मनलाई केही शान्ति मिल्छ । आमा आनो साडीको सप्कोले आँसु पु्छ्दै, “के रे, बेलायत ? छोरा ! भो अब घर आ, झन् टाढा नजा । बरू म आउँछु बाबु तँलाई भेट्न तुरून्त काठामाडौ“,” भन्छिन् । आनो कलेजोको टुव्रmा कतै लोप हुन्छ कि भन्ने आमालाई डर हुन्छ । आमाले भन्छिन्, “छोरा, म पर्सि आइतबार काठमाडौ“ आउँछु, केही चिन्ता नगर् ल पैसाका लागि ।”
आमा आउने कुरा सुनेर रञ्जना र कमल एकदमै खुसी हुन्छन् ।
घरको प्रतिष्ठालाई आँच आउने गरी केटी लिएर भागेकोमा बुवालाई ठूलो चोट त लागेको थियो । बुवाले आनै खानदानभित्रकी दुलही छोराका लागि बन्दोबस्त गरेर विवाहको सबै तयारी भइसकेका बेलामा कमलले ती सबै सपनामाथि तुषारापात गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै कमलको बुवाले भुलेको छ । केही समय कुरा नखाएकोमा छोरामाथि रिस उठेको थियो । छोराले यसरी कुरा नखाई घरबाट गए पनि बुवाआमाको माया छोराप्रति कहिल्यै कम भएको थिएन । छोरो कहिले फर्वmला भन्ने आशा राखेर पर्खिरहेको थियो बुवा । घरबाट निस्केर गएको तीन वर्षदेखि छोरो फर्केर आएको थिएन ।
बुवाको सुरूको आवेश शिथिल भैसकेको थियो । यो कुरा कमललाई थाहा थिएन । किनकि ऊ तीन वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएको थियो । बुवाको डर उसको मनबाट अझ गएको छैन । यसै डर र लज्जाबोधका कारण रञ्जना र कमल केही वर्षका लागि धेरै टाढा उडेर जाने प्रयासमा थिए । उनीहरुले आशा गरेअनुसार बुवाआमाले बोलाएका थिएनन् । अब घरमा बोलाउँछन् कि भन्ने आशा निभिसकेकाले टाढा पलायन हुने सोच पलाएको थियो दुवैको मनमा ।
रञ्जनालाई आनो बुवाआमालाई केही भन्ने त के, मुख देखाउने साहससम्म भएको छैन । बुवाआमा र खानदानको इज्जतको विचारै नगरी त्यसरी भागेकीले पनि उसलाई मनभित्र कताकता अपराधबोध भइरहन्थ्यो । कुनै दिन सबैको मन फर्कला भन्ने आशा लिएर पर्खेर बसेकी छे ऊ । कमलको आमा आउने कुराले आशाका केही किरण मनमा झुल्किन थाल्छ । कमलले अस्ति आमासित पैसाको लागि कुरा गरेपछि आमाले आपैm“ काठमाडौ आउने कुरा भनेकी थिइन् । आमा पर्सि आइतबार दस बजेको जहाजबाट काठमाडौ“ आउँदै छिन्् । कमल र रञ्जना आमाको प्रती†ामा खुसी छन् । आमासित भेट हुने क्षणलाई सम्झँदै रोमाञ्चित छन् ।
अलि बिसन्चो भए पनि कमल कार्यालयमा आएको थियो । उसको साथी गोपालले कमललाई सहानुभूतिस्वरुप, “कमल घर गएर अराम गर यार । काम त भइहाल्छ नि, बिरामीमा पनि किन आ’को ?” भन्यो ।
कमलले, “होइन, ठीकै छ यार, अहिले सिजनमा धैरै काम छ नि । तातोपानी र औषधी खाँदै छु । अहिले धेरै बिसेक भइसकेको छ,” भनेर काममा लाग्छ । गोपाल मालिक भए पनि उसको व्यवहारमा त्यही पुरानो मित्रता थियो । केही फरक आएको थिएन । त्यसै कारण तिनीहरुका दिन राम्ररी बितिरहेका छन् । व्यापार राम्रो चलिरहेको छ ।
गोपालले कमललाई, “यार, करोडौ“को मालिकको छोरो भएर पनि तिमीमा जुन सादापन छ त्यो नै तिम्रो विशेषता हो । मित्र एकपल्ट बुवालाई फोन गरे हुन्थ्यो नि?” भनेर उसको मन बुझ्न खोज्यो ।
कमलले लामो सास फेर्दै, “गोपाल ! बुवालाई फोन गर्ने आँट कहिल्यै आएन, तर अस्ति आमालाई फोन गरेको थिएँ । आमा आउँदै छिन् र पहिलो चोटि आनी बुहारीलाई भेट्दै छिन्,” भनेर रञ्जनातिर हे¥यो ।
रञ्जना आज खुसी देखिएकी छे र हतारमा छे । ऊ गोपाललाई भन्छे, “आमा आउँदै छिन् । हामीलाई आज र भोलि शपिङ गर्नु छ। गोपालदाइ ! पर्सि हामीलाई बिदा दिनुप¥यो !”
गोपाल हाँस्दै, “त्यो भइहाल्छ । बरू आमालाई लिन म पनि गाडी लिएर जान्छु, हुन्न?” भन्छ ।
रञ्जना र कमलले एकैचोटि हुन्छ भन्छन् अनि घर फर्कन्छन् । कमलको ज्वरो हटिसकेको छ । मोटर बाइकमा दुवै जना असनतिर केही सामान किन्न जान्छन् । उनीहरु आमा कतिखेर आइपुग्ने होला भन्ने विचारले मात्र पनि रोमाञ्चित भएका छन् । कमल सोच्दै छ, आखिरमा जन्मदातृ आमाभन्दा यो संसारमा कोही ठूलो छैन । कमल सोच्दै छ— ‘रगतको सम्बन्ध त्यति कमजोर हँुदैन, जसबाट मैले जीवन पाएँ, संसार पाएँ ऊ नै मेरो भगवान हो, सबै थोक हो ।’ कमललाई आमाको अगाध स्नेहको आभास भइरहेको छ, स्नेहको गाढा अनुभूतिले खुबै खुसी छ ऊ ।
डेरा सफा गरेर चिटिक्क पारिसकिएको छ । शनिबारभरि उनीहरु व्यस्त भएका थिए । भोलि आइतबारको प्रतीक्षा गर्दै दुवै जना निदाउने प्रयासमा छन्, तर उनीहरुलाई आजको रात आमाको प्रती†ाको रात भएर होला निद्रा पर्न गाह्रो भइरहेको छ । मध्यराततिर दुवै निदाएछन् । बिहान साढे सात बजेतिर मोबाइलको घण्टी बज्दा बल्ल रञ्जना र कमल उठ्छन् । गोपालले फोन गरेको रहेछ । उताबाट गोपालले, “तिमीहरु कति बजे निस्कने हौ ?” भनेको सुनेर हतारि“दै कमल भन्छ, “अब एकैछिनमा हि“ड्छौ“ ।” यति भनेर ऊ पलङबाट उफ्रिएर झर्छ र फोन समातेरै बाथरूमतिर लाग्छ ।
उनीहरु त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगिसकेका छन् । समय बिहानको साढे नौ बजिरहेको छ । बुद्ध एअरबाट आमा आउँदै छिन् । त्यसैले कमल सम्बन्धित काउन्टरमा जहाजको अवतरणको समय सोध्न जान्छ । जहाज ठीक समयमा उडेको खबर पाउँछ । कमल र रञ्जनाका हृदयभरि असीम खुसी उर्लिरहेको छ । यतिका दिनपछि आमासँग भेट हुँदै छ । त्यस कारण त्यो खुसीमा डुबेको कमल व्यग्र भएर आमालाई पर्खिरहेको छ । घडीको सुईको मिनेट–मिनेट ऊ गन्ती गरिरहेको छ । अहिले उसलाई एक मिनेट एक दिन जस्तो लागिरहेछ ।
थानकोटबाट बतासिँदै बुद्ध एअर एक फन्को मारेर ठीक समयमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरित हुन्छ । पलपल ममताको अगाध स्नेहको आभास र आमाको मातृवात्सल्ययुक्त हातहरुको स्पर्शको अनुभूति कमललाई भइरहेको छ । रञ्जनालाई पनि खुसीका साथसाथै सङ्कोच, डर र लाज सबै अनुभूतिले भित्रैदेखि अचेटिरहेको छ । आज पहिलोचोटि सासूसँग भेट हुने दिन !
जहाजबाट विमानस्थल वाहनमा चढेर आएका मानिसहरु एकएक गरेर ओर्लंदै छन् । वहानबाट आर्लेका मध्येमा कमलले आमालाई मात्र नभई बुवालाई पनि देख्छ । रञ्जनाले पनि आनै बुवाआमालाई त्यही वहानबाट ओर्लंदै गरेको देख्दा कताकता भय लाग्न थाल्छ ।
कमलले रञ्जनालाई भन्छ, “रञ्जना, बुवा पनि आउनुभएको रहेछ । हेर हेर, टोपी ओढेर आमाको अघिअघि । ऊ हरियो साडी लगाएकी आमा ।”
रञ्जना अवाव्m छे । एकछिनपछि भन्छे, “कमल, मेरा बुवा र आमा पनि पछिपछि आउँदै छन् । ठीक तिम्रा बुवाको पछिपछि ।”
उनीहरु एकैछिनसम्म केही बुझ्न सक्दैनन्् ।
रञ्जनाले नै पहिले भन्छे, “किन सबै एकैचोटि आएका होलान् ? कतै...?”
कमलले बीचैमा भन्यो, “रञ्जना, डराउनु पर्दैन । यो रगतको शक्तिले तानेर ल्याएको हो ।”
अनि गोपाल मुसुमुसु हाँस्दै भन्छ, “आनो आनै हुन्छ मित्र । सन्तानको माया कसलाई हुँदैन र ?”
उनीहरुसित सामान केही थिएन । सीधै सबै बाहिर आउँछन् । उनीहरुको धैर्यको बाँध फुट्छ । रञ्जना र कमल आआना आमाहरुतर्पm दौडँदै जान्छन् । त्यस्तै सन्तानहरुलाई देखेर दुवै आमाहरु दौडँदै आउँछन् । एउटा भावनाको आवेग, ममता र स्नेहको बाढ उर्लेर त्यहाँका सबैमा खनिन्छ । कमल र रञ्जनालाई आमाहरुले अँगालो मार्दै गालामा म्वाइँ खाँदै मिलनको खुसीका आँसु खसाल्न थाल्छन् । कमल र रञ्जना पनि आआना आमाहरुलाई पालैपालो ढोगेपछि बुवाहरुलाई पनि ढोग्छन् । कृष्णलाल र मनबहादुर दुवै हाँस्दै दुई जनालाई समातेर अँगालोमा हाल्छन् । रञ्जना र कमल दङ्ग पर्छन् । कृष्णलाल खुसी हुँदै भन्छ, “रञ्जना मेरो बचपनको अति मिल्ने साथी मनबहादुरकी छोरी भनेर पछिल्लो सप्ताह मात्र थाहा लाग्यो । आज नै हामी दुई बजेको जहाजबाट घर फर्कने हो । जहाज टिकट लिइसकेका छौ“ । हामीलाई छोडेर बेलायत जाने विचार नगर । तिमीहरुलाई घरले पर्खिरहेको छ ।”
रञ्जना र कमल छक्क पर्छन् र अवाव्m हुन्छन् ।
त्यसपछि मनबहादुरले भन्छ, “रञ्जना छोरी ! कमल कृष्णलालको छोरा हो भनेर मलाई थाहा नै थिएन । हामी दुवै जना बालककालदेखिका मित्र हौ“ । सँगै एउटै स्वmुलमा पढेका थियौ“, तर म आर्मीमा गएपछि हाम्रो भेट भएको थिएन। मलाई खुसी लागेको छ, कमलभन्दा राम्रो ज्वाइँ अरु हुनै सक्दैन ।” यो अप्रत्याशित मिलनले खुसीको लहर बोकेर ल्याएको थियो । कमल र रञ्जना दङ्ग हुन्छन् । सबै जना कमल र रञ्जनाको डेरामा आउँछन् । गोपालको एभरेस्ट एडभेन्चर ट्राभल्सका सबै कर्मचारी साथीहरु भोजन तयार बनाएर उनीहरुको स्वागतमा पर्खिरहेका देख्दा रञ्जना र कमल छक्क पर्छन् ।
गोपालले त्यति बेला कमल र रञ्जनालाई भन्छ, “बुवाआमाको माया सधै“ सन्तानप्रति रहन्छ, किनभने रगतको सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन । बुवाले जुन दिनदेखि तिमीहरु काठमाडौ“ आएका थियौ, त्यसै दिन मलाई सम्झाउनुभएको थियो । मेरो ट्राभल्समा मैले काममा लगाएको उहाँकै निर्देशनमा थियो । बेलाबेला फोन गरेर सोध्नुहुन्थ्यो । अनि तिमीहरु बेलायत जाने कुरा सुनेपछि उहाँको धैर्य टुट्यो, तिमीहरुलाई घर बोलाउने उचित अवसर हेरिरहेका थिए सबैले ।” गोपालले अघि भन्दै जान्छ, “ मसित जुन दिन तिमीले आमासित फोन सम्पर्क ग¥यौ त्यही दिन बुवाले मसित कुरा गर्नुभएको थियो । उहाँले मलाई आज आउने खबर गर्नुभएको हो । त्यसैले यो बन्दोबस्त गरेको हुँ । यार, अब बेलायतको कुरा छाड, पोखरा फर्केर बुवाआमाको सेवा गर । आखिर आना भनेका आनै हुन्छन् ।”
कमलले गोपाललाई, “हामीलाई यी सबै कुरा किन लुकाएको नि यार ?” भन्दा गोपालले हाँस्दै भन्यो, “उचित समय पर्खेर बस्नुपरेको थियो यार त्यसैले ।”
सबै खुसी हुँदै फेरि तीन बजेको लाइटबाट पोखरा फर्केका थिए ।
पोखरा एयरपोर्टमा दुबै परिवारका आफन्त जमातले कमल र रञ्जनालाई स्वागतका लागि बाजागाजासहित पर्खिरहेका थिए ।